Podcast 13 × 18: Iyo Face ID yatinorota tese, asi kwete yemunhu wese | ndinobva ku mac
Podcast 13 × 18: Iyo Face ID yatinorota tese, asi kwete yemunhu wese
Isu tinogovana imwezve vhiki chikamu cheApple podcast yedu yezuva rino rechipiri remwedzi waKukadzi 2022. Munyaya iyi tinotaura nezvazvo. kuitwa kweFace ID nemask neiyo vhezheni itsva yeIOS 15.4 pasina chikonzero chekushandisa Apple Watch yayo uye isu tinotsanangudza zvishandiso zvichaenderana nebasa iri. Zviripachena tinotaura nezve dzimwe nyaya dzakawanda muchikamu chitsva chepodcast.
Ichi ndicho chinongedzo chekuti iwe upinde yedu YouTube chiteshi uye kuti iwe unogona kutiteverera mune inotevera episode gara kana iwe unogona kunakirwa nepodcast yakaburitswa mu iTunes nokuti teerera pairi uye kupi kwaunoda. Kana iwe uine chero mibvunzo kana mazano uye uchifunga kuti tinogona kutaura pane podcast, unogona kuzviita uchirarama kuburikidza nechat inowanikwa paYouTube, uchishandisa hashtag #podcastapple paTwitter kana yakanaka kubva kuchiteshi chedu chitsva muDiscord Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti yakasununguka zvachose kune wese munhu uye kuti isu tiri kuwedzera vashandisi vanoshanda.
Uye zvakare isu tinofanirwa kutenda wese aripo kukambani yako mune izvi zvakanyanya kukura, vazhinji uye vazhinji vashandisi vanosangana vapenyu uye vanotibvunza isu zvakananga nezve tekinoroji yazvino yeApple, zvigadzirwa zvaro uye nezvimwewo nyaya zvisina hukama zvakananga neApple. Zvechikwata zviri chaizvo mufaro wekugovana zviitiko zvedu zvese nekuziva zvakoIsu tinovimba kuti ino nzanga yevashandisi iri kuramba ichikura zuva nezuva.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » dzakawanda » Podcast 13 × 18: Iyo Face ID yatinorota tese, asi kwete yemunhu wese
Maitiro ekugadzirisa iyo iPad kune yazvino vhezheni iripo
Hutsva hutsva hweApple Watch hwave kuwanikwa